Computer Systems – Tagged "Mice" – ICT.com.mm
Logitech Wireless Mouse M170 (Black)K19,000
AULA H512 Wired Optical Mouse With 12 KeysK53,000
Crome M516 Optical Mouse (Black)-5K7,000
AULA H510 Wired Optical Mouse With 14 Keys (Black)K56,000
AULA F808 Wired Optical Mouse With 10 Keys (Black)K29,000
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Logitech Colour: Black Type: Wireless mouse Model: M170 Warranty: 1 Year RELIABLE 2.4GHZ WIRELESS Strong, consistent wireless connection from distances up to 10-meters (33-feet) away. With virtually...
AULA H512 Wired Optical Mouse With 12 Keys
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: H512 Up to 10000 dpi RGB backlight Acceleration : 20g Frame rate : 5000fps Colour: Black Handedness: Right Hand Type: Wired Connection: USB2.0 Number of Keys: 12...
Crome M516 Optical Mouse (Black)-5
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Crome Model: M516 Type: Optical Mouse Color: Black Resolution: 2400 DPI Cable Length: 1.6m Interface: USB 2.0 Warranty: 1 Year
AULA H510 Wired Optical Mouse With 14 Keys (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product name: AULA H510 Gaming Mouse Color: Black Up to 10000 dpi RGB backlight On-board memory Acceleration : 20g Frame Rate : 6200fps Moving Speed : 60ips...
AULA F808 Wired Optical Mouse With 10 Keys (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product name: AULA F805 Gaming Mouse Color: Black Brand: ‎Aula Up to 4200 dpi Acceleration : 20g Frame rate : 6666fps Moving speed : 60ips Product Dimensions:...
AULA F805 Wired Optical Mouse With7Keys (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product name: AULA F805 Gaming Mouse Colour: Black Handedness: Right Hand Up to 6400 dpi Chroma backlight Acceleration : 12g Frame Rate : 4000fps Speed: 32inches/sec Polling...
Anitech W225 Ergonomic Design Wireless Mouse (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Silent Left Click – White Can adjust DPI3levels 800-1200-1600 There isabutton to adjust the front – back. side of the mouse It can...
Anitech W224WH Wireless Silent Optical Mouse (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: ANITECH Technology: Optical Number of Buttons:3Connectivity: Radio frequency Colour: Black Host Interface: USB Hand Orientation: Ambidextrous Scroller Type: Scroll Wheel Battery Power: 1 AA/LR06...
Anitech W224BK Wireless Silent Optical Mouse (Black)
Anitech W221 Wireless Optical Mouse (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Anitech မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ W221 Wireless Optical Mouse (အပြာရောင်)ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုအတွက် 2.4 GHz ကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Mouse ရဲ့ Resolution ဟာ 1200 DPI ရှိတဲ့အတွက် ပေါ့ပါးမြန်ဆန်တဲ့ Mouse တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ nano receiver ကို...
Crome Wired Optical Mouse (CM-137U)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Resolution: 1000 DPI Button lifetime:3million times Scroll wheel lifetime: 200,000 circles Scan rate: 3000 f/s Warranty: 1 Year
Apple Magic Mouse 2021 (Silver)-13
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Multi-Touch Connections and Expansion: Bluetooth, Lightning port, Wireless System Requirements: Bluetooth-enabled Mac with OS X 10.11 or later, iPad with iPadOS 13.4 or later Compatible with Mac...
Rapoo Multi-mode Wireless Mouse M650 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Multimode Wireless mouse 1300 DPI Sensor 10 meter wroking range 2.4G wireless/Bluetooth3.0/Bluetooth5.0 Intelligently swtich among multiple devices The side is made of soft rubber Switch between Bluetooth...
Rapoo Multi-mode Wireless Optical Fabric Mouse M500 Silent (Red)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Multi-mode wireless connection: connect via Bluetooth 3.0, 4.0 and 2.4 GHz Up to 10 m range and 360 degree coverage Connect simultaneously to up to3devices...
Logitech Gaming Mouse (G300S)-21
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Resolution: 200 – 2,500 DPI processor: 32-bit ARM Max. speed: >150 IPS Acceleration: >20G Main buttons: 10 million clicks Report Rate: 1000 Hz (1ms) Warranty:2Years...
Apple Magic Mouse 2021 (Silver)-15
Crome CM-32BU Wired Mouse (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wired optical mouse Elegant and ergonomic design Easy control on most surface Suitable for both right or left handed users The numbers of keys:4DPI: 1000dpi...
BARMASO Safefit Case for iPad Pro 11 (2020) Black
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Smart Case အစစ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကာဗာကို ဖွင့်ပိတ်ခြင်းဖြင့် iPad ကို auto wake-up/sleep ဖြစ်စေတယ်။ Premium Germany TPU အထူနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ပြုတ်ကျဒဏ်အရမ်းခံနိုင်တယ်၊အရောင်မလွှင့်တတ်၊Chemical အနံ့မရှိ။ Apple Pencil တွေက ခနခန ပျောက်သွားတာ မဖြစ်စေအောင် Apple Pencil Firm Hold...
Verbatim Wireless Optical Mouse Black
Item Code: 66432 RF: 2.4 GHz/ 8 Channel Three levels of sensitivity: 800/1200/1600dpi Product Dimension: 105 x 66 x 35mm Product Weight: Mouse 62g, Nano receiver 1.8g Battery required: 1...
Prolink Wireless Optical Mouse PMW6008 (Silver)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Buttons:4Sensor: Optical DPI Resolution: 800/1200/1600 DPI Interface: USB USB Report Rate: 125Hz FPS: 2400 times/sec Dimension: 100 x 61 x 38 mm (product only) Weight:...
Prolink Wireless Optical Mouse PMW6008 (Blue)
Prolink Wireless Optical Mouse PMW6008 (White)